China FerroChrome fekitori uye vagadziri | Feng Erda
Ferrochrome (FeCr) chiwanikwa chechromium nedare rine pakati pe50% uye 70% chromium. Pamusoro pe80% yenyika ferrochrome inoshandiswa mukugadzira simbi isina chinhu. Zvinoenderana nekabhoni zvemukati, inogona kukamurwa kuita: Yakakwira kabhoni ferrochrome / HCFeCr (C: 4% -8%), Medium kabhoni ferrochrome / MCFeCr (C: 1% -4%), Yakadzika kabhoni ferrochrome / LCFeCr (C: 0.25 % -0.5%), Micro kabhoni ferrochrome / MCFeCr: (C: 0.03 0.15%) .China yekuwedzera chikamu chekugadzirwa kwepasi peerrochrome.
Ferrochrome International Brand （GB5683-2008 00
TUtilised mukugadzirwa kwesimbi isimbi， Simbi isina simbi inoenderana nekromium pakuonekwa kwayo uye kurwisa ngura.
②Saiyo huru chiwanikwa chiwedzero mukugadzira simbi
③Sezvinokosha zvekuwedzera mukuita kwakaderera kabhoni simbi yekunyungudisa
Pashure: Nesilicon Manganese chiwanikwa
Zvadaro: Nokuchengetedza simbi bhora
Ferro Chrome Mitengo
Yakakwira Carbon Ferro Chrome
Yakadzika Carbon Ferro Chrome